पशुपती आर्यघाटमा यसरी गरियो नायिका तथा निर्माता जेनी कुंवरको अन्तिम बिदाई !! (भिडियो हेर्नुस्) « Gaunbeshi
पशुपती आर्यघाटमा यसरी गरियो नायिका तथा निर्माता जेनी कुंवरको अन्तिम बिदाई !! (भिडियो हेर्नुस्)
एक समय फिल्ममा राम्रै जमेकी उनले २०५७ सालमा कलाकार निर्देशक मोहन निरौलाको ‘अदृश्य श्रम’ नामक सिरियलबाट अभिनय सुरु गरेकी थिइन् । फिल्म भने पहिले ‘जिन्दगानी’ थियो । त्यसपछि मैदान, जीवनदाता, कानून, अभिमन्यु, मलाई माफ गरिदेऊ, हलचल, धूम, मिस्टर ड न, त्यागी मान्छे, हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ लगायत करिब दर्जन फिल्म अभिनय गरेकी उनले ‘हलचल’ र ‘घायन’ नामक दुई फिल्म बनाएकी छन् । सिरियल र म्युजिक भिडियो समेत अभिनय गरेकी उनले केही म्युजिक भिडियो निर्देशन समेत गरेकी छन् । उनी गीत समेत गाउँथिन् ।
दुई फरक धर्म र रितिरिवाज अपनाउँदै यी कलाकार एक भए, बिहेमा करोडौं खर्च गरे
एजेन्सी । कट्रिना कैफ र विक्की कौशल डिसेम्बर ९ मा विवाह गर्दैछन् । कट्रिना–विक्कीको
काठमाडौ । कलाकार सागर लम्सालसंग प्रेममा परेको चर्चामा रहेकी प्रिज्माले आफुले प्रेममा सम्मान नपाएको बताएकी